NgoMvulo, Aprili 12, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UMichael Reynolds
Nabani na ondaziyo mhlawumbi uyazi ukuba ndingumlandeli omkhulu Izinhlelo zeGoogle. Ukwazisa ngokupheleleyo, I-SpinWeb yi Umthengisi weZicelo eziGunyazisiweyo zikaGoogle, ke ukuzibophelela kwethu kwimveliso kucacile. Zininzi izizathu ezifanelekileyo zokuba nemincili ngeeapp zikaGoogle, nangona kunjalo… ngakumbi njengeshishini elincinci.
Izinhlelo zeGoogle ngokwenene indawo yeMicrosoft Office. Xa ndixelela abantu le nto, ngamanye amaxesha bayathandabuza, yiyo loo nto ndisenza yonke into semina ngesihloko sokukhanyisa ngakumbi ngalo mbandela. Ishishini elenza ukutsiba ukuya kuGoogle Apps liya kuba lityale imali kwiziseko zophuhliso ezibandakanya i-imeyile, ikhalenda, ulawulo lwamaxwebhu, inkomfa yevidiyo, kunye nolawulo loqhakamshelwano olukhuphisana neMicrosoft Exchange ngexabiso eliphantsi. Makhe sijonge.
I-imeyile kaGoogle: Enye indlela enamandla yokuTshintsha
Imeyile kwi Izinhlelo zeGoogle yiGmail esiyaziyo nesiyithandayo sonke. Nangona kunjalo, iiGoogle Apps zikuvumela ukuba ufake i-imeyile yakho ngegama lesizinda senkampani yakho ukuze uqiniseke ukuba liphawulwe ngokufanelekileyo. Akukho mntu ufuna ukusebenzisa i-imeyile yabathengi kwishishini, akunjalo? Usetyenziso lukaGoogle luyiGmail yeshishini, kwaye kubandakanya izinto ezongeziweyo njengokucoca ulwenziwo logaxekile kunye nemigaqo-nkqubo yokuncamathelisa Kwakhona kubandakanya izixhobo zokufuduka ezenza kube lula ukufuduka kwi-Exchange. I-imeyile inokufikeleleka ngewebhu, umxhasi we-imeyile (njenge-Outlook okanye iApple Mail), kunye neselfowuni. Isabelo esingagqibekanga somsebenzisi ngamnye ngama-25GB, nesisa kakhulu.
Ukongeza, ucoceko logaxekile kunye nentsholongwane kwi-imeyile kaGoogle yeyona nto ibalaseleyo kushishino. Andifane ndibone iimpazamo zobuxoki kwaye uninzi lwe-imeyile engafunekiyo iyabanjwa kwaye icocwe. Ukufudukela kuGoogle Apps kuyashenxisa imfuno yesisombululo somntu wesithathu.
Ikhalenda njengabafana abakhulu
Iimpawu zekhalenda kwi Izinhlelo zeGoogle ziyamangalisa. Imibutho inokucwangcisa iintlanganiso nabantu kunye nezixhobo (ezinje ngamagumbi enkomfa, iiprojektha, njl. Njl. Ngokucofa nje okumbalwa. Amalungu eqela anokujonga ezinye iishedyuli zabasebenzi kwaye abone ulwazi olukhululekileyo / oluxakekileyo ngokulula. Oku kwenza ukucwangciswa kweentlanganiso ngaphakathi kwintlangano ngokukhawuleza. Isikhumbuzo sentlanganiso singathunyelwa nge-imeyile okanye umyalezo obhaliweyo kwaye zenziwe ngokwezifiso ngumsebenzisi ngamnye.
Suite epheleleyo yeOfisi
Ndichulumancile ngenqaku lamaXwebhu eeapps zikaGoogle. Uninzi lwemibutho isebenzisa iLizwi, i-Excel, kunye nePowerPoint njengesoftware yeofisi yazo emiselweyo. Oku kuthetha ukufaka isoftware kuzo zonke iikhompyuter, kunye nokuyixhasa nokuyigcina. Oku kunokuba kubiza. Konke oku kungahamba noGoogle Amaxwebhu. Imibutho ngoku inokugcina onke amaxwebhu endaweni enye kwaye iwaququzelele ngeendlela ezintle kakhulu.
Into emnandi malunga noGoogle amaXwebhu kukuba isusa uxinzelelo lokuba "ngubani onenguqulo yamva nje yolo xwebhu?" Nge-Google Amaxwebhu, onke amaxwebhu ayenziwa ngqo kwinkqubo kwaye kukho ikopi enye kuphela yalo naluphi na uxwebhu olunikiweyo ngalo lonke ixesha Abasebenzi banokusebenzisana kumaxwebhu kwaye benze utshintsho kwaye lonke uhlaziyo luyalandelwa ukuze uhlale ubuyela kwiinguqulelo zangaphambili kwaye ubone ukuba ngubani owenze ntoni.
Imibutho inokubeka onke amathala eencwadi kuGoogle amaXwebhu kwaye ihambe i-100% ngaphandle kwephepha kuba ungalayisha naluphi na uhlobo lwefayile. Inokuguqulwa ibe yiDocument kaGoogle okanye igcinwe ngokulula kwiserver yefayile. Amaxwebhu kaGoogle akunika iseva yefayile, idrayivu ekwabelwana ngayo, kunye neofisi yonke kwindawo enye ngaphandle kwezixhobo zesoftware okanye isoftware onokukhathazeka ngayo.
Yiba buqu ngencoko kaGoogle
Enye into entle ye Izinhlelo zeGoogle yeyona nto incoko yevidiyo. Nawuphi na umqeshwa onekhamera yewebhu angazibandakanya kwiseshoni yenkomfa yevidiyo nomnye umsebenzisi ukwenza intsebenziswano ibelula. Umgangatho ubalasele kwaye unokuba nengqungquthela kunye nabanye abasebenzisi bakaGoogle ngaphandle kwenkampani yakho. Ayisiyonto intle njengenye yesisombululo senkomfa yevidiyo yeshishini kodwa isebenza kakuhle kwaye isisombululo esikhulu kubasebenzisi abaninzi.
Yonke imisebenzi kwi Izinhlelo zeGoogle sebenza kakuhle kakhulu kwizixhobo eziphathwayo. Ikhalenda yam ye-iPhone iyavumelaniswa ngaphandle komthungo neKhalenda yam kaGoogle kwaye ndinokutsala naluphi na uxwebhu kwifowuni yam, ngokunjalo. Ndiyakwazi ukuhlela amaxwebhu kwifowuni yam! Oko kuthetha ukuthini ukuba ndinokuthwala zonke yamaxwebhu enkampani yam kunye nam naphi na apho ndiya khona. Ewe ichanekile - lonke uxwebhu kwinkampani yam ngoku luyafikeleleka kwifowuni yam. I-imeyile ikwasebenza ngaphandle komthungo kwaye yenza kube lula kakhulu ukunxibelelana endleleni.
Elinye lawona manqaku athengiswa kakhulu kwiiNkqubo zikaGoogle kukuba ayifuni lutyalo mali lwezixhobo zokusebenza. Yonke into ibanjwe kumaziko edatha kaGoogle kwaye ujongano lubhalwe nge-SSL. Oku akugcini nje ukugcina imali eninzi, kodwa kwenza umbutho wakho uguquke ngakumbi. Abasebenzi ababonakalayo banokujoyina le nkqubo ukusuka naphi na, iiofisi ezihambayo ziba lula kakhulu, kwaye idatha yakho ikhuseleke kakhulu kunokuba ibiseofisini yakho. Ndiyathanda ukuqhula ukuba iofisi yethu inokutsha ngomso kwaye singekhe siqaphele kuba iinkqubo zethu ziya kuqhubeka nokusebenza.
Ukhetho oluSebenzayo lweMibutho
Inguqulelo yeshishini Izinhlelo zeGoogle Ixabisa i-50 yeedola ngomsebenzisi ngonyaka kwaye inokumiselwa ngokukhawuleza okukhulu. Ndizivulile iiakhawunti kwaye ndenza ukuba abathengi bam baphakame kwaye basebenze ngaphakathi kweentsuku. Ukuba uva iintlungu zonxibelelwano nenkqubo yakho yangoku, ungathanda ukungabinamphepha, kufuneka usebenzisane ngcono namalungu eqela, okanye ungathanda ukuqala ukugcina imali kwisoftware yakho yeofisi, Ndingakukhuthaza ukuba uzame iGoogle Apps.
Nceda undazise ukuba ndinganceda. Ndingathanda ukuva amava akho ngeGoogle Apps, ngokunjalo, nceda ushiye ingxelo engezantsi!
tags: Bhala ingxeloUphando lwezoPhandomarblesIibhokisi zewebhu
Kutheni kwaye njani ungabhalisa njani kwaye ufumane iNombolo ye-DUNS
Epreli 12, 2010 ngo-10: 55 AM
Amen. Sisebenza yonke inkampani yethu (http://raidious.com) kuGoogle Apps, kwaye khange sibenangxaki- amava amahle kakhulu. Ndinqwenela ukuba benze ulawulo lweprojekthi / isixhobo sokuhamba kunye nesixhobo seCRM sokuhamba nayo!
Epreli 12, 2010 ngo-11: 29 AM
Ngokwenyani, iTactileCRM idityaniswa neeapps zikaGoogle ngeNdawo yeMakethi 🙂
Epreli 13, 2010 ngo-7: 59 AM
Ndicebisa iiGoogle Apps kubo bonke abathengi bam, ngaphandle kobungakanani. Ndibasete ngokwam inani labo ke kuyakufuneka ndikhangele inkqubo yokuGunyazisa ukuGunyazisa. Enye yezinto ezintle endizibonileyo xa ndibamba iMediaTemple kukuba ndinako ukulawula zonke iisetingi ze-DNS kumamkeli. Umrhumo wam wobhaliso wesizinda kuyo nayiphi na useto lwe-DNS oluphambili, ngenxa yoko ndigcinile isibini semali apho.
Epreli 13, 2010 ngo-10: 59 AM
Idayito! Ndayishiya i-Outlook ngoJanuwari 1, 2010. Yayisisigqibo esaziwayo kunye nesigqibo seshishini ukwenza njalo. Ndiziphume zonke iiapp zikaGoogle kwaye andizisoli kwaphela. Nam ndiyabakhuthaza bonke abathengi bam ukuba "BAYA KUGoogle" - iyavakala ngeendlela ezininzi zokwenza njalo.